ग्यास्ट्रिक, क्यान्सर लगायत यति धेरै रोगका लागि उपयोगी सुकमेल, यस्ता छन् आश्चर्यजनक फाइदा Canada Nepal
टी-१० क्रिकेट लिगमा नेपाली अलराउन्डर करण केसीको डेभ्यु
राष्ट्रिय महिला लिग : सावित्राको तीन गोलमा एपीएफको जित
प्रोस्टेट क्यान्सर कस्ता पुरुषलाई हुन्छ र कसरी थाहा पाउने ?
धितोपत्र बजार : नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट
देशलाई अस्थिरतामा जानबाट जोगाउन प्रतिनिधिसभा विघटनः प्रधानमन्त्री ओली
सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोरकिशोरीको 'मानसिक स्वास्थ्यमा दुष्प्रभाव'
नेपालमा २८ हजार ७ सय ३२ जनाले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप, कहाँ कतिले लगाए ?
क्यानाडानेपाल श्रावण १७ २०७७
काठमाडौं - हाम्रो भान्सामा प्राय नटुट्ने मसला हो सुकमेल । खासमा परिकार स्वादिष्ट बनाउन हामिले सुकमेल प्रयोग गर्ने गर्छौ । तर यसमा औषधिय गुण हुन्छ । औषधिय गुणले भरिपुर्ण सुकमेलमा नियासिन, पाइरिडोक्सिन, रिवोफ्लाभिन, थियामाइन, भिटामिन ए, भिटामिन सी, सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, कपर, आइरन, म्यांगनिज, जिंक लगायतका तत्वहरु पाइन्छ ।
यसको सेवनले ग्यास्ट्रिक, कोलेस्टेरोल तथा क्यान्सरलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । साथै यसको सेवनले रक्तसन्चारमा पनि सुधार ल्याउछ । त्यस्तै सुकमेलको सेवनले मुटुसम्बन्धी समस्याबाट पनि टाढा रहन सकिन्छ ।
तपाईको दाँतसम्बन्धी रोग भएमा पनि यसले ठिक गर्छ । सुकुमेलले नपुंसकता, यौन उत्तेजना नहुने र चाँडै वीर्य झर्ने समस्यालाई पनि ठिक गर्छ । सुकमेलको सेवनले घाँटी सुकेको पनि ठिक हुन्छ ।
त्यस्तै दमको समस्या छ भने पनि सुकमेलले ठिक हुन्छ । तपाईमा यात्रा गर्दा बान्ता आउने गर्छ भने पनि सुकमेल च्याप्दा बान्ता आउदैन । यसको सेवनले मानसिक तनाव हुँदैन । यसको सेवनले मुखमा आउने दुर्गन्ध पनि कम गर्छ ।
श्रावण १७, २०७७ शनिवार १९:५१:०० बजे : प्रकाशित
मधुमेह हुँदा यी चार स्न्याक्स खानुस् सुगर नियन्त्रण हुन्छ
काठमाडौँ। पछिल्लो समय खानपान र जीवनशैलीका कारण अधिकांश मानिस मधुमेहको उच्च जोखिममा परेका छन् । मधुमेह हुँदा खानपानलाई नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । खानामा प्राप्त हुने अतिरिक्त चिनीले असर पु¥याउँछ । यसले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउँछ ।
रगतमा सुगरको मात्रा बढी या कम हुनाले शरीरलाई नोक्सान गर्छ । मधुमेह रोग लागेकालाई सामान्य मान्छेको भन्दा बढी भोक लाग्छ । छिटो छिटो भोक लाग्नाले खानाको इच्छा हुन्छ, जो मोटोपनको कारण बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा यी खानेकुरा खानुपर्छ जसले भोकलाई सन्तुष्टि पार्छ र रगतमा सुगरको मात्रा पनि बढ्दैन ।
मधुमेहका रोगीले ड्राइफुट्स खानु राम्रो हुन्छ । तर, त्यो त्यति धेरै लिनु हुँदैन । आवश्यकभन्दा बढी बदाम खाएमा त्यसले मानिसलाई थप विरामी बनाउँछ । बदाममा फाइबर, भिटामिन, मिनरल्सको मात्रा उच्च र काब्र्सको मात्रा कम हुन्छ । ड्राइफुट्स खाँदा रगतमा सुगरको मात्रा बढ्दैन, त्यसैले स्न्याक्समा पेस्ता, ओखर, काजु, बदाम खाने गर्नुपर्छ ।
पिनट बटर र स्याउ
मधुमेह रोगीका लागि फलफूल निकै उपयोगी हुन्छ । स्याउमा न्युट्रियिन्स, भिटामिन बी, सी, पोटासियन हुन्छ । स्याउको एक टुक्रा पिनट बटरसँग खाँदा धेरै फाइदा हुन्छ । पिनट बटरमा भिटामिन ई, म्याग्नेसियम र मेग्निजले सुगर नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । सुगरका रोगीले नासपाति पिनट बटरसँग खाने गरेमा धेरै फलदायी हुन्छ ।
उसिनेको अण्डा विभिन्न रोग लागेका मानिसलाई उपयोगी सावित हुन्छ । त्यसमा पनि मधुमेहका रोगीका लागि यो ज्यादा लाभदायक हुन्छ । अण्डामा प्रोटिनको मात्रा धेरै हुन्छ । यसले सुगर नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ । आफ्नो स्न्याक्समा उसिनेको अण्डालाई राख्ने गरेमा धेरै राम्रो हुन्छ ।
योगर्ट र बेरिज
दुग्धजन्य उत्पादन योंगर्ट (दही) मधुमेह रोगीका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसले भोक नियन्त्रणमा राख्छ । यसले सुगरको मात्रालाई बढ्नबाट रोक्छ । योंगर्टमा जामुन हालेर खाने गरेमा लाभदायक हुन्छ । यसले मेटावालिज्म उच्च बनाउँछ ।
माघ ७, २०७७ बुधवार १४:२३:१४ बजे : प्रकाशित
# चार स्न्याक्स
किसमिस दिनहुँ भिजाएर खानुस्, पाँच रोग नियन्त्रण गर्छ
काठमाडौँ। यदि तपाई स्वस्थ रहन चाहनु हुन्छ भने दिनहुँ किसमिसका १० दाना राति भिजाएर बिहान खाने गर्नुस् । रगत कमी हुने, उच्च रक्तचाप र पाचन प्रक्रियासम्बन्धी समस्या किसमिस खानाले समाधान गर्छ । अंगुर सुकाएर किसमिस बनेको हुन्छ ।
कसरी खाने किसमिस ?
एक रात १० दाना भिजाउनुहोस्
किसमिस त्यतिकै खान पनि सकिन्छ । तर, एक रात भिजाएर बिहान खाँदा त्यसबाट निकै फाइदा हुन्छ । पानीमा भिजेपछि किसमिसको दाना फुल्छ त्यही खानुहोस् । किसमिस भिजाएको जुन पानी हुन्छ त्यो पनि पिउनुहोस् । भिजेको किसमिसमा आइरन, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फाइबर भरपूर हुन्छ । मधुमेहका रोगीले भने किसमिस खानुहुँदैन । किसमिस हरियो, खैरो, कालो प्रकारका हुन्छन् । यदि तपाई तरकारी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने किसमिसको पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
भिजेको किसमिस र त्यसको पानी खानाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ । यसमा हुने एन्टिआक्सिडेन्ट्सका कारण इम्युनिटी पावर निकै राम्रो हुन्छ । जसले विभिन्न ब्याक्टेरियासँग लड्न सक्षम हुन्छ । जसका कारण खराब ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन ।
ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ
एक रात भिजेको किसमिस खानाले सबैभन्दा बढी ब्लड प्रेसर (उच्च रक्तचाप) का विरामीलाई फाइदा पु¥याउँछ । ब्लड प्रेसर र हाइपेरटेन्सनबाट पीडित हुनेले किसमिस खाएमा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । यसमा हुने पोटासियमले हाइपरटेन्सनका विरामीलाई लाभदायक हुन्छ । किसमिसले मुुटुरोगीलाई पनि फाइदा गर्छ ।
शरीरमा रगत बढाउँछ
किसमिसको नियमित सेवनले एनिमिया रोगबाट बचाउँछ । किनकि किसमिस आइरनको धेरै राम्रो स्रोत हो । किसमिसमा भिटामिन बी कम्प्लेक्स बढी पाइन्छ । यी सबै तत्व रक्त सञ्चारमा उपयोगी हुन्छ । किसमिसमा तामा पनि पाइन्छ, जसले रातो रगतको सेल्स बढाउन मद्दत गर्छ ।
पाचन प्रक्रिया सुधार गर्छ
भिजेको किसमिसबाट क्यालोरी ज्यादा पाइन्छ । त्यसैले किसमिस धेरै खानु ठीक हुन्न । नियमित रूपमा किसमिसलाई खानामा सामेल गर्नाले पाचन प्रक्रिया सुधार गर्छ । किसमिसमा फाइबर भरपूर हुन्छ । एक गिलास पानीमा १२ वटासम्म किसमिस भिजाएर खाने गर्नुहोस्, तपाईको पेटको समस्या निमूर्ल हुन्छ ।
शरीरबाट गन्ध बाहिर निकाल्छ
किसमिसलाई राति भिजाएर बिहान पानी छानेर खाने गर्नाले यसबाट धेरै लाभ पाउन सकिन्छ । किसमिसको पानीले शरीरमा रहने टाक्सिन्स अर्थात् गन्ध र खराब पदार्थ बाहिर निकाल्छ । जसले तपाईलाई कलेजो, किडनी, पत्थरीलगायतका रोगबाट बचाउँछ । किसमिसको पानी दिनहुँ पिउनाले छालामा समेत चमक आउँछ ।
माघ ५, २०७७ सोमवार १८:२०:५० बजे : प्रकाशित
# भिजाएर खानुस्